အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်း၏ကမ္ဘာကြီးကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းအသစ်များကိုအပတ်တိုင်းစတင်ဖြန့်ချိ၍ဂရပ်ဖစ်များသာမကဂိမ်းသည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာန်းကျင်ခဲ့ကြသူဆိုဒ်များရှိပါတယ်,သင်သည်သူတို့၏စုဆောင်းမှုမှတဆင့်သွားလျှင်သင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အဟောင်းဆိုဒ်များအများအားဖြင့်အဟောင်းတွေဂိမ်းတွေနဲ့လာမယ့်နေကြသည်,နှင့်အရည်အသွေးအကြောင်းအရာခေတ်မမီတော့တဦးတည်းအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သငျသညျလတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးအခမဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ်းအဖြစ်နေ့စွဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းမှတက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။, ကျနော်တို့ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေသောဤစုဆောင်းမှုယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးအမာခံဂိမ်းတွေနဲ့လာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကြှနျုပျတို့ကဒီမှာအမာခံဂိမ်းကစားပျော်မွေ့ဖို့လာသူကိုမည်သူမဆိုကစားရန်တစ်ခုခုကမ်းလှမ်းရန်လုံလောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့နှင့်ကွဲပြားသောစာကြည့်တိုက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအားလုံးသည်ဂိမ်း ၅ ခုတွင်လာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မြင့်မားသောဆုံးဖြတ်ချက်အချို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂိမ်းကစားရကြလိမ့်မည်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂိမ်းအင်ဂျင်နှင့်အတူအပေါင်းတို့နှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဒါအစစ်အမှန်အသံစေမည်သောအကောင်းဆုံးအသံသက်ရောက်မှုအချို့နှင့်အတူ. တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ဤစုဆောင်းမှုသည်လုံးဝလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းအဆင်သင့်ဖြစ်သည်၊ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ဘရောက်ဇာမှမည်သည့်တိုးချဲ့မှုကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်မလိုဘဲသင်မည်သည့်ကိရိယာတွင်မဆိုဂိမ်းအားလုံးကိုကစားနိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပျော်စရာက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းသောလုံခြုံပြီးကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်လာပါတယ်။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုလာနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ရုံညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ထံမှရဘယ်တော့မှစိတ်ကျေနပ်မှု၏ကြင်နာပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးစိတ်ကူးယဉ်ကစားလာပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှိသည်!
ဒီစုဆောင်းမှုကဖုံးအုပ်ထားတဲ့အမျိုးအစား၊အမျိုးအစားတွေကိုစောင့်ရှောက်မှုနဲ့အတူတူထားခဲ့တယ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလာလည္တဲ့သူတိုင္းအတြက္ဂိမ္းေဆာ့ခ်င္ၾကပါတယ္။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ပျော်မွေ့နိုင်ဂိမ်းဤမျှလောက်များစွာသောအမာခံအောက်ခံများနှင့်စတိုင်များရှိပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာပြုလုပ်ဂိမ်းအမျိုးအစားမှကြွလာသောအခါ,ငါတို့သည်သင်တို့ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းစတိုင်များကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအမာခံအရေးယူမှုနှင့်ပတ်သက်. အဲဒီဂိမ္းေတြထဲမွာေတာ႔ သင္႔ေတာ္တဲ႔ ဂိမ္းတစ္ခုကေနသင္႔ေတာ္တဲ႔ ဂိမ္းတစ္ခုရလာတာနဲ႔တူပါတယ္။ သို့သော်သင်သည်လိင်အားလုံးကိုထိန်းချုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်။, ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ဤဂိမ်းဇာတ်ကောင်တစ်ဦးပြောင်းလဲစိတ်ကြိုက်မီနူးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြတယ်,သင်သည်ထိုသူတို့သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို၏ငယ်များနှင့်ကမျြးစာကိုတူအောင်နိုင်အောင်.
သင်ပျော်မွေ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အပေါ်နောက်ထပ်အမျိုးအစားကပိုပြီးရှုပ်ထွေးဂိမ်းနှင့်အတူကြွလာ,ရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ထက်ပိုကမ်းလှမ်းကြောင်း. သငျသညျဇာတ်ကောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများရှိသည်နိုင်နှင့်သင်၏လုပ်ရပ်များနှင့်ရွေးချယ်မှုဂိမ်းပျက်ပြယ်ပုံကိုသက်ရောက်စေမည်။ ကျနော်တို့တောင်မှဆိုက်ပေါ်တွင်ပဟေဠိဂိမ်းများနှင့်လောင်းကစားရုံညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ဗျူဟာကျွမ်းကျင်မှုကိုစိန်ခေါ်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောကဒ်အခြေစိုက်စစ်တိုက်ဂိမ်းနှင့်အတူလာ။
အခါသင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သောအသငျသညျအကြှနျုပျတို့ဤမျှလောက်အမျိုးမျိုးပူဇော်ကြောင်းပြောရမယ်။ ဆယ်ကျော်သက်များအနေဖြင့်ဤဂိမ်းများတွင်ဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးကိုနှစ်သက်နိုင်သည်။ ကာတွန်းနှင့်ကာတွန်းများမှဇာတ်ကောင်များနှင့်အတူရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများပင်ရှိသည်၊ကျွန်ုပ်တို့သည်နဂါးဂိမ်းများနှင့်ကစားနည်းများပင်ရှိသည်။ ဒါကအားလုံးပါဝင်နိုင်ဂိမ်းကစားဆိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်,ဒါကြောင့်နေပါစေသင်တို့၏လိင်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်,သင်လိင်တူချစ်သူအပိုင်း၌သင်တို့၏ကွီးမွတျစိတ်ကူးယဉ်ဘို့ဂိမ်းများကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ထိုမျှမကပိုရှိပါတယ်။ ရုံကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့စတင်ပါ။
ထိုသို့သောဆိုက်အသစ်၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းသောအချက်ဖြစ်သည်။ သင်သည်အချိန်မအတွက်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂိမ်းမျိုးကိုတွေ့လိမ့်မည်၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ျာဘက်ကြည့်ရှုခြင်းကိရိယာများရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ဂိမ်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်အခြားကစားသမားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်အောင်ကျနော်တို့တောင်မှအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပူးတွဲမျှကြိုးနှင့်မျှမကန့်သတ်နှင့်အတူသင်တို့ထံသို့လာကြ၏။ ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ 18 ကျော်သောသူတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသောအရာအားလုံးကိုလက်လှမ်းမီသည်။, ငါတို့သည်လည်းသင်တို့သည်ဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်စူးစမ်းနေချိန်တွင်အဘယ်သူမျှအစဉ်အဆက်သင်နေသောထွက်ရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုပေးအပ်သောဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြသည်။